Goolwalihii qaranka NZ oo ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee Jimcaha | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Goolwalihii qaranka NZ oo ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso...
Goolwalihii qaranka NZ oo ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee Jimcaha
(Christchurch) 18 Maarso 2019 – Xiriirka Kubadda Cagta New Zealand Football (NZF) ayaa xaqiijiyay in laacib ka tirsan xulka Futsal-ka dalkaasi, Atta Elayyan uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii argagixisada ahaa ee lagu qaaday Christchurch Jimcihii.
Allaha u naxariistee, Elayyan, 33 jir, ayaa 19 kulan oo caalami ah u saftay xulka Futsal Whites oo uu goolwale u ahaa.
Goolwalahan oo asal ahaan u dhashay dalka Kuwayt ayaa ku dukanayay masjidka Masjid Al Noor Mosque, oo u dhow Hagley Park, halkaasoo uu kaga mid noqday 50 qofood oo halkaa uu ku khaarajiyay argagixiye lagu magacaabo Tarrant.
Previous articleXog hordhac ah oo laga helay Sanduuqa Madow ee dayuuraddii dhacday! (Maxaa dhacay?)
Next articleMaxay tahay sirka ka dambaysa in SOMALIA caalamku ku loollamo?!